SAFFRON PEOPLE'S MOVEMENT: ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီးတဦးပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီးတဦးပါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
အခင်းဖြစ်တဲ့ X2O(ပုံကို ညီလင်းဆက် ဘလော့မှ ၇ယူပါသည်။)
ရန်ကုန် ဧပြီ ၁၅။
ရနကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးစောင်းရှိ X2O အမည်ရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင် ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ပြင်းထန်သော ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီး အမျိုးသား၅ဦးနှင့် အမျုိးသမီး၃ဦးသေဆုံးကာ ၇၅ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
မျက်မြင်သက်သေများ၏ ပြောပြချက်အရ ပေါက်ကွဲမှုမှာ ၃ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပထမပေါက်ကွဲမှု ၂ခုမှာ နှစ်မိနစ်အတွင်း ဖြစ်ခဲ့ကာ တတိယ ပေါက်ကွဲမှုမှာ နောက်သုံးမိနစ်ကြာခန့်တွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများတွင် လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူ လေးဦးလဲ ပါရှိသည်ဟု သိရပြီး တဦးမှာ ရန်ကုန်တိုင်း အမှတ်၎ နယ်မြေမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အုန်းချိုဖြစ်သည်ဟု တွေ့ရှိသူများက ပြောပြပါသည်။
ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွါးပြီး မကြာခင်ပင် လုံခြုံရေး များရောက်ရှိလာပြီး နေရာကို ချက်ချင်း ပိတ်ဆို့ကာ ဒဏ်ရာရသူများကို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် တာဝန်ကျနေသော သူနာပြု ဆရာမ တဦးက ဒဏ်ရာရရှိသူအချို့မှာ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်သည်ဟု ပြောပါသည်။
ထိုဗုံးပေါက်ကွဲမှု သတင်းကို ညနေ၆နာရီနှင့် ညရနာရီ ၃၀တို့တွင် တီဗီသတင်းဖြင့် ထုတ်ပြန် ကြေငြာ သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ တရားခံကို ဝိုင်းဝန်း ရှာဖွေပေးရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံသွားပါသည်။
ယခုသတင်း တင်ပြချိန်အထိ မည်သည့် အဖွဲ့ကမှ လုပ်ဆောင်သည်ဟု ထုတ်ဖေါ်ခြင်းမရှိသေးပါ။
Posted by saffrontoward at 7:19 AM
နောက်ထပ် ဘယ်နေရာမှာ ခွဲအုံးမလဲမသိဘူး သတိထားသွားလာကြရင်ကောင်းမယ်နော် သန်းရွေတို့ အုပ်စုကတော့လူသတ်ဖို့ ဆိုတာ သိပ်ဝန်မလေးပါဘူး ပေါ်တင်သတ်ရမလား နောက်ကွယ်ကသတ်ရမလား ရုပ်ကိုကကြည့် ပါလား တခါမှ ပြည်သူကို တီဗွီပေါ်က ပြုံးပြတယ်ဆိုတာမရှိဘူး သူ့ ကြည့် ရတာခွေးဘီလူးကြည့် ရသလိုပဲ
Rcymaung April 16, 2010 at 1:58 PM
မတင်ရင်လဲနေဗျာ နောက်မရေးတော့ ဘူးပေါ့ 
Dr April 16, 2010 at 4:53 PM
Out Traditional New Year is getting worst. We have no more place or time to make happiness in myanmar as even bomb blast in ThinGyan. It's Shameful!!!! and Heart Ache!!! Wanna say Sorry for the Family of Victims!!!
ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီးတဦးပါ...